ဟီးရိုးထလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားကို တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ ဇဏ်ခီ
အင်တာဗျူးကို ကြည့်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်တဲ့။
SMS Voting စနစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဟီးရိုးထလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကြောင့် ဇဏ်ခီတစ်ယောက် စိတ်မကောင်းဖြစ်လို့နေပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင်လည်း အဲဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တုန့်ပြန်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။
Photo : ဇာဏ်ခီ
သရုပ်ဆောင် ဇဏ်ခီဟာ Star Awards က ပြုလုပ်တဲ့ People choice award SMS Voting နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူတို့ အရင် နှုတ်ထွက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ နှုတ်ထွက်မှုအပေါ်ကိုလည်း ဟီးရိုးထလုပ်တယ်ဆိုပြီး အပြောခံရတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဇဏ်ခီက ယခုလို ပြန်လည်တုန့်ပြန်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
“ဟီးရိုး ထလုပ်တယ်" ဆိုပဲ ကျွန်တော် တို့ရဲ့ရပ်တည်မှုကိုသိပုံမရဘူး။SMS နဲ့ Voting လုပ်တဲ့ကိစ္စကနေထွက်တာ ကျွန်တော် စခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပါ့မယ်။ ကျွန်တော်တို့ပုံတွေဖြုတ်ခိုင်းတဲ့မနက်က ကျွန်တော်တို့ပုံတွေနဲ့အတူ SMS နံပါတ်တွေတွေ့တွေ့ချင်းစိတ်တော်တော်ပျက်သွားမိတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတွေမှာ vote လုပ်တဲ့စနစ်တွေနဲ့ ဒီသရုပ်ဆောင်တွေကို သူတို့ရဲ့ fan အချင်းချင်းပြိုင်ခိုင်းတာကို သဘောမတွေ့လို့ပါ။ နောက်အချက်တွေကတော့..
1. ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုတင်ခွင့်တောင်းခြင်း အသိပေးခြင်းလုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူး။ ခွင့်တောင်းရကောင်းမှန်းမသိတာလား ခွင့်တောင်းစရာမလိုဘူးလို့တွေးတာလား ဆိုတာတော့ ကျွန်တော်မမှန်းဆတတ်ပါဘူး။ 2. ခွင့်တောင်းခဲ့သည်ရှိသော် ကျွန်တော်တို့မှာငြင်းပိုင်ခွင့်ရှိရပါမယ်။ လူတစ်ဦးချင်းမှာ လွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ 3. ငြင်းခဲ့ရင်လည်းပဲ ငြင်းပယ်ချက်ကို လေးစားမှုအပြည့်နဲ့လက်ခံနိုင်ရပါမယ်။ အထူးသဖြင့် စာနယ်ဇင်းသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပိုပြီးတော့တောင် နားလည်လက်ခံနိုင်စွမ်းရှိသင့်ပါတယ်။” ဆိုပြီး ဇဏ်ခီက ဧပြီ(၆) ရက်နေ့က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။
ဇဏ်ခီအနေနဲ့ SMS Voting စတွေကနေ နှုတ်ထွက်တာဟာ ဟီးရိုးလုပ်ခြင်းဖြစ်သာ ဖြစ်တယ်လို့ ဦးမြတ်ခိုင်က အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ဖြေသွားတဲ့အပေါ် သူက ဒီလို ထပ်ပြောထားပါတယ်။
“အခုဒီ interview ထဲမှာပြောသွားတဲ့ပုံကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့် အနုပညာသမားတွေပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ကတော်တော် သေးသိမ်လွန်းပါတယ်။ Interview ကိုနားထောင်ပြီး အံ့သြမိသလို စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ People's Choice Award အတွက်ထည့်သွင်းထားတဲ့အနုပညာသမားအများစုဟာ FB account မရှိလည်း အောင်မြင်နေပြီးသားသူတွေပါ။ အခုလိုရေးခြင်းဟာလည်း ဟီးရိုးထလုပ်တာမဟုတ်သလို like တွေ follower တွေတိုးအောင်လုပ်နေခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ SMS voting ကနေထွက်သွားတုန်းကအကြောင်းအရင်းအတိုင်းပါပဲ။ ကိုယ့်သိက္ခာကိုယ်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျား။” ဆိုပြီး ဆက်လက်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။